भुइँमान्छेबारे लेखिएको अग्लो किताब- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
भुइँमान्छेबारे लेखिएको अग्लो किताब
आश्विन २८, २०७४ मोहन मैनाली
२०६९ सालमा नेपालका दैनिक पत्रिकामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मुसहर, दलित, थारू आदि उत्पीडित मानिसहरूका घरमा बास बस्न पुगेको समाचार छापिएका थिए । यो समाचार अहिले पनि धेरैले सम्झन्छन् । तर कति समाचार छापिँदैनन्, छापिइहाले पनि त्यस्ता समाचारको सम्झना मानिसलाई हुँदैन तर ती दूरगामी महत्त्वका हुन्छन् ।
जस्तै, बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै बेला सुनसरीको एउटा स्कुल व्यवस्थापन समिति विद्यार्थीका अभिभावकले छान्न पाउनुपर्छ भनी सुरु भएको आन्दोलनमा मुसहर र थारू महिला कुटिए । कुटाइबाट एक जना मुसहर महिलाको गर्भ पतन भयो । कुट्नेमध्ये केहीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको पार्टीका मानिसको आशीर्वाद भएको दावी गरेका थिए । यसपछि भएका घटनाले यस कुराको पुष्टि गरे किनभने गर्भपतन हुने गरी कुट्नेहरूलाई कुनै सजाय भएन । कुटिनेहरू थुनिए, धम्क्याइए ।
पत्रकार यज्ञशले लेखेको किताब ‘भुइयाँ’ मा यो र यस्ता कुराको वर्णन विस्तारमा गरिएको छ । ‘जुन पार्टी र शक्ति थारू मुसहरको अधिकारका लागि लडेको थियो, त्यही पार्टीको नाममा सावित्री र सुलो सदालाई धम्की आउन थाल्यो,’ यस घटनाका बारेमा यज्ञशले लेखेका छन् ।
यज्ञशको किताब ‘भुइयाँ’ छापिँदै छ भन्ने सुन्दा मलाई लागेको थियो नेपाली साहित्यमा अर्काे एउटा उपन्यास थपिने भएछ । उपन्यासको जगजगी भएका बेलामा यज्ञशले पनि उपन्यास लेखेछन् ।
किताब विमोचनका दिन थाहा पाएँ ‘भुइयाँ’ उपन्यास होइन रहेछ । यज्ञशले यस किताबमा सम्पूर्ण जीवन जग्गामा निर्भर भएर पनि एक इन्च पनि जग्गा आफ्नो नभएका, नेपालका सबैभन्दा कमजोर वर्गका मानिसको दु:ख र जग्गा पाउनका लागि तिनले गरेका संघर्षको चित्रण गरेका छन् । यसो गर्ने क्रममा उनले नेपालका राजनीतिक दलहरूको कुरूप तथा बहुरूपी चरित्रलाई पनि उदाङ्गो पारेका छन् ।
‘भुइयाँ’मा यज्ञशले यस्ता मान्छेका वास्तविक कथा लेखेका छन् जसले भोग्नुपरेका घटना सुन्दा पत्यार लाग्दैन किनभने ती कल्पनै गर्न नसकिने खालका थिए ।
प्रकाशकले ‘भुइयाँ’लाई गैरआख्यान अर्थात् यो आख्यान होइन मात्र भनेका छन् । गैरआख्यानअन्तर्गतको कुन विधा हो भनेका छैनन् । यात्रा संस्मरण, अनुसन्धान, जीवनीजस्ता विविध विधाको संयोजन भएकाले यसलाई कुनै एउटा विधामा नबाँधेको हुन सक्छ । खासमा ‘भुइयाँ’ समाज विज्ञानको किताब पो रहेछ । तर यसो भनेर पाठकले तर्सनु पर्दैन किनभने यसको प्रस्तुति बेजोडको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मतदाताका सानातिना तर जायज आकांक्षालाई कसरी वास्ता गरेनन् र तिनले आफ्ना मतदाताको विश्वास कसरी गुमाए भन्ने कुरा ‘भुइयाँ’मा संकेत गरिएको छ । पहिले नेपाली कांग्रेस, त्यसपछि नेकपा (एमाले) अनि माओवादीलाई विश्वास गरेका एक जना मानिसका कुरा यसरी लेखिएको छ, ‘...यसपछि आए माओवादी । माओवादी सबैभन्दा कडा थिए । सबैभन्दा पहिला यिनै भाँचिए । अहिले त सर, यसो हेर्दा म सबै पार्टी अरूका नै देख्छु । सबै सरकार मात्रै देख्छु । जति पार्टी छन् ती सबै सरकार हुन्, शासक हुन् ।’
माओवादीले अन्यायमा परेका सामान्य मानिसको त कुरै छाडिदिउँ आफ्ना कार्यकर्तासमेतलाई कसरी निराश बनाएको छ भन्ने उदाहरण पनि छ किताबमा । किताबमा लेखिएको छ, ‘जमिनदारसँग क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरा भएको थियो । त्यो बेला माओवादीले सबै जिम्मा लियो । क्षतिपूर्ति हामी दिलाउँछौँ भने प्रशासनलाई पठाइदियो, अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।’
किताब पढ्दा लाग्छ— राजनीतिक दलहरू आफू सत्तामा पुग्न न्यायका कुरा गर्छन् । उनीहरू जब सत्ता वा सत्ताको नजिक पुग्छन् तब अन्यायबाट सबैभन्दा बढी पिसिएका मानिसलाई बेवास्ता गर्छन् ।
सम्पूर्ण रूपमा जग्गामा निर्भर रहेका कति जना मानिसको जग्गा नहोला ? यज्ञशले निकालेको हिसाबअनुसार कैलालीमा ४० हजार जति होलान् । एक परिवारमा ५ जना हुन्छन् भन्ने सामान्य हिसाब निकाल्दा कैलालीमा ८ हजार परिवार भूमिहीन हुन्छन् । हरेक परिवारलाई आधा बिघा जग्गा दिँदा पनि ४ हजार बिघा जग्गाले पुग्दो रहेछ । कैलालीमा मासिन लागेको वन फाँडेर यति जमिन दिइयो भने पनि त्यहाँ प्रशस्त वन बाँकी रहला । यसरी हेर्दा भूमिहीनको समस्या धेरै ठूलो रहेनछ ।
यसो नहुँदा भूमिका नाममा थरीथरीका आन्दोलनका भएका छन् । तीमध्ये कति सफल भए, कति आंशिक रूपमा सफल भए । कतिचाहिँ असफल भए जसले भूमिहीनको अवस्था झन् खस्कायो । धेरै ठाउँका यस्ता आन्दोलनलाई लगातार केही वर्षसम्म हेरिसकेर यज्ञश भन्छन्, ‘अधिकारका सबै लडाइँले उपलब्धि नदिने पनि रहेछन् । सलमाले भरपाई माग गर्नु जायज थियो तर उनले कमाइरहेको जग्गासमेत गुमाइन् । आन्दोलनमा लाग्न उकास्ने तर त्यसलाई पार लगाउन नसक्नेहरूसँग सलमा रिसाएकी छन् । यसमा माओवादी र अधिकारवादी दुवैथरी पर्छन् ।’
भूमिहीनताको अन्त्यका लागि उपायको संकेत पनि उनले एउटा प्रसंगमा गरेका छन् । जस्तै, मुक्त कमलरीलाई पढाउने र खाने बस्ने सुविधा भएको स्कुल । सबै भूमिहीनका सन्तानले स्तरीय शिक्षा र शिक्षा आर्जन गरुन्जेल खान–बस्न पाउने हो भने अर्काे पुस्ताले केही हात जमिनमा शरण लिनका लागि यसअघिका पुस्ताले जस्तो जीवन दाउमा राख्नुपर्ने थिएन ।
यज्ञशले जसका बारेमा लेखेका छन् उनीहरूलाई पटक–पटक भेटेका छन् । यसबीचमा उनीहरूको जीवन के कसरी फेरियो वा फेरिएन भन्ने हेरेका छन् । विभिन्न दृष्टान्त हेरेर उनले एक वा दुई वाक्यमा निचोड प्रस्तुत गरेका छन् । ती निचोडका एकाध दृष्टान्तका हकमा मात्र होइन समग्र नेपाली समाजका हकमा सत्य सावित छन् । लेखकले चाहिने ठाउँमा तथ्यांक राखेका छन् तर तिनलाई एकै ठाउँमा थुपारेर पाठकलाई वाक्कदिक्क बनाएका छैनन् । रोचक प्रसंगका बीचमा राखेर पाठकलाई थाहै नदिईकन तथ्यांक र तिनले दिने सन्देश सुनाएका छन् ।
यज्ञश सुन्दर वाक्य कुँद्छन् । यस किताबमा पनि उनले त्यसो गरेका छन् । भुइयाँ पढ्दा लाग्छ— सुन्दर लेखन कुनै विधाविशेषको एकाधिकार होइन । लेख्न जान्ने मान्छेले जुन विधा छोयो त्यसैलाई सुन्दर बनाउँछ । उनका केही सुन्दर वाक्य संयोजन :
– दजेह एउटा अग्नि कुण्ड हो, जसमा जिउँदा जाग्दा केटीहरूको हवन हुन्छ ।
– मानिस त्यतिखेर पछि रहँदैन, जब उसमा चेतना आउँछ ।
– बाढी एकपटक आयो, पालकी चढ्ने भक्त बारबार आउँछन् ।
कतै–कतै ठाउँको वर्णन भने अलमल्याउने खालको छ । जस्तै, धनगढी पुगेर कञ्चनपुरको वर्णन गर्छन् अनि धनगढी र कञ्चनपुरबीचको ठाउँका मान्छे भेट्न जान्छन् । इटहरीबाट पाठकलाई धरान पुर्‍याउँछन् र त्यहाँ वर्णन गर्छन् धरानभन्दा तल्तिर बसेका मान्छेको ।
यज्ञशले भनेका छन्, ‘विसं १४३६ मा जयस्थिति मल्लका पालादेखि छुवाछुतलाई कानुनी संरक्षण दिइएको मानिन्छ ।’ मेरा विचारमा यो कानुनी संरक्षण मात्र होइन कानुनी संरक्षणभन्दा कठोर कुरा थियो किनभने त्यतिबेला छुवाछुत गर्नेले कानुनी संरक्षण मात्र पाएको थिएन । छुवाछुत नगर्नेलाई कठोर जरिवाना गरिन्थ्यो । कानुनी संरक्षण शब्दावलीले छुवाछुतसम्बन्धी प्रावधानको निर्दयताको व्याख्या गर्न सक्दैन ।
यस्ता सानातिना कुराको क्षतिपूर्ति यज्ञशले प्रस्तुतिमार्फत् दिएका छन्– कुनै प्रसंग आउँदा त्यसभन्दा अघिपछिका कुरा जोडेर । जस्तै, रसुवाकी पुतली तामाङको कथा भन्दै जाँदा उनी पुतलीले जग्गाको लालपुर्जा पाएको कुरा बताउँछन् । र हामीलाई सम्झाउँछन्– त्यतिबेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए ।
यसअघि माधव नेपालका बारेमा बलदेव रामले गरेको मूल्यांकन बताउने क्रममा यज्ञशले भनेका हुन्छन्– यिनका लागि चाहिँ बलदेवसँग धेरै प्रिय शब्द छैनन् ।
यस प्रसंगमा आएपछि यज्ञश भन्छन्, ‘मैले अचानक बलदेव रामलाई सम्झिएँ । माधव नेपालकै पालामा पुतलीले लालपुर्जा पाएको खबर पाएदेखि उनी नेपालसँग अलि कम रिसाउँथे कि ?’
लेखकले एउटा निरर्थक आशा गरेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई । उनले भनेका छन्, ‘...संघीय संरचनाले सरकारहरूलाई अलि नजिक पुर्‍याउनेछ भन्नेमा आशावादी पनि ।’ सरकारलाई नजिक पुर्‍याएपछि निर्धा मानिसले अधिकार पाउलान् भन्ने आशा उनमा झल्कन्छ । तर उनले किताबभर उदाहरण दिएर के प्रस्ट पारेका छन् भने भूमिहीनका अधिकार खोस्न, उनीहरूलाई दबाउन स्थानीय ठालुहरूको हात छ र संघीय संरचनामा, तिनलाई नियन्त्रण गर्ने दलमा यिनै ठालुहरूको वर्चस्व छ । यस्ता बेलामा सरकार नजिक आइपुग्दा दमितहरूले झन् डराउनुपर्ने हुन्छ ।
‘भुइयाँ’ नेपाली समाजको यस्तो ऐना हो जसमा सबैभन्दा पिल्सिएको वर्गको दु:ख देख्न सकिन्छ, उनीहरूका त्यस्ता दु:ख निवारण गर्छु भनेर राजनीति गर्नेले अझ दु:ख दिएको पनि प्रस्ट हुन्छ ।
प्रकाशित : आश्विन २८, २०७४ १०:४२
एउटा यात्राको आविष्कार !
मेरो यो यात्राको सफलता निकै धरमरमा थियो । यस्तो धरमर पाँच हजार मिटरभन्दा अग्लो लार्के भञ्ज्याङ पार गर्दा पनि भएको थिएन । लार्के भञ्ज्याङभन्दा अग्लो लिपुलेक पार गरेर तिब्बत जाँदा पनि भएको थिएन ।
जेष्ठ २७, २०७४ मोहन मैनाली
धेरै वर्षपहिले यात्रा गर्ने एउटा नयाँ तरिका आविष्कार भएको रहेछ । तर अहिलेसम्म पनि यो तरिका त्यति लोकप्रिय भएको छैन । संसारका अरू ठाउँमा पनि छैनजस्तो लाग्छ, नेपालमा त झनै छैन ।
यात्रा गर्ने यो तरिका एकदमै आकर्षक छ । यसका आविष्कारकले सोचेका थिए— चुइँया होउन् कि फजुलखर्ची, धनी होउन् कि गरिब, युवा होउन् या बूढाबूढी, गर्मी ठाउँमा बस्ने मानिस होउन् अथवा जाडो ठाउँमा बस्ने सबै मानिस यस्तो यात्रा गर्न लालायित हुन्छन् ।
यस्तो खालको यात्रा गर्न पैसा खर्च गर्नु पर्दैन । ती आविष्कारकका विचारमा यस कुरामा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । यसै कारणले गर्दा मध्यम खालको आम्दानी भएका मानिसले यात्रा गर्ने यस तरिकाको प्रशंसा गर्नुपर्छ रे ।
यसै कारणले गर्दा अर्काे वर्ग अर्थात् धनी वर्गका मानिसले यस्तो यात्राको प्रशंसा गर्नुपर्छ रे । यसका आविष्कारक भन्छन्— यस्तो यात्रा गरेर बिरामीले पनि प्रशस्त आनन्द लिन सक्छन् । यस्तो यात्रा गर्दा ठन्डी स्याँठ खानु पर्दैन । कहिले गर्मीले पिल्सनु र कहिले जाडोले सेकिनु पनि पर्दैन ।
अरू खालको यात्रा गर्न डराउने, कातर मानिसका लागि यस्तो खालको यात्रा अझ बढी उपयोगी हुन्छ रे । किनभने यस्तो यात्रामा ‘कुनै पनि किसिमको खतरा आइपर्दैन ।’ यसका आविष्कारकले के आशा गरेका छन् भने यस तरिकाबारेमा थाहा पाएपछि यात्रा गर्न अहिलेसम्म आँट नगरेका, आँट गरेर पनि यात्रा गर्न नसकेका र यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दै नसोचेका हजारौं मानिसले यस्तो यात्रा गर्ने सुर कस्छन् ।
उहिल्यै पत्ता लगाइएको, यात्रा गर्ने यो नयाँ तरिका बारेमा मैले त्यति बेला थाहा पाएँ जति बेला म राम्ररी हिँडडुल गर्न नसकेको तीन महिना जति भएको थियो । घरबाट ५ सय मिटर जति टाढाको उपचार केन्द्रमा जाँदा बाटामा दुई/तीन ठाउँमा थकाइ मार्नुपथ्र्याे । बाटोको पेटीमाहिँड्दा तीन/चार ठाउँमा चार इन्च जति ओर्लनु र उक्लनुपथ्र्याे । यसो गर्न मैले निकै ठूलो साहस बटुल्नुपथ्र्याे । त्यति बेला म पेटी त्यसरी बनाउने चलनलाई सराप्ने गर्थें ।
आफू अररिएर हिँडेको बाटोमा अरू बटुवा आफ्ना दुवै हात हल्लाएर/जीउ मर्काएर हिँडेको देख्दा मलाई डाहा लाग्थ्यो । म मनमनै भन्थें, ‘के फुर्ती देखाएको ? हात त्यति धेरै नहल्लाईकन/जीउ त्यति धेरै नमर्काईकन हिँडे पनि त हुन्छ नि !’
गाडी चढेर हिँड्दा पनि असह्य हुन्थ्यो । मोटरसाइकल चढ्ने त कुरै भएन । मैले भेटेका धेरैमध्ये एक जना डाक्टरले आदेशको शैलीमा मलाई सल्लाह दिएका थिए— मोटरसाइकल नचढ्नू । अरू चढेको पनि नहेर्नू ।
यस्ता बेलामा यस यात्राका आविष्कारकले भनेको सम्झिएँ, ‘संसारिक जञ्जालबाट मुक्त भएर एकान्तमा समय बिताउने अवसर नपाउने मानिस जति दु:खी र असहाय यस संसारमा अरू को होला र ?’
यात्रा गर्न रमाउने मजस्ता मानिस यो कुरासँग असहमत हुने कुरै थिएन । कुरा यति मात्रै थियो— यस्ता बेलामा यात्रा कसरी गर्ने ?
‘हे, दु:खी, बिरामी, थकित मान्छे हो ! आओ मेरा पछि लाग ।... हे अल्छी हो ! उठ, हिँड । यात्रामा निस्क !’ ती आविष्कारकले मलाई नै भनेभैँm लाग्यो र म यात्रा गर्ने उनको यो तरिका जान्न थप उत्सुक भएँ ।
यात्रा गर्ने यो तरिका उनले सन् १७९० मा आविष्कार गरेका रहेछन् । केही वर्ष त उनको यो आविष्कारबारे केही मानिसलाई मात्र थाहा थियो । यस्तो यात्रा गरेर उनले लेखेको किताब सन् १७९४ मा छापिएपछि यात्राको यो तरिका सार्वजनिक भयो ।
यो किताबको नाम ‘भोइयाज ओतुर दमा सँब्र’ हो र यसका लेखक हुन् साइभिय द मेस्थ्र । यो किताब फ्रेन्च भाषामा लेखिएको थियो । अंग्रेजी भाषामा १८२९ मा पहिलोपटक छापिएजस्तो देखिन्छ । त्यसयता यसलाई धेरै जनाले अनुवाद गरेका छन्, भिन्न–भिन्न प्रकाशकले छापेकाछन् : ‘भोयज अराउन्ड माई रुम’, ‘जर्नी अराउन्ड माई रुम’ आदि नाममा ।
यो किताब हिजोआज पनि चर्चित, समसामयिक र उपयोगी छ । त्यसैले त तीन–चार वर्ष पहिलेसम्म पनि यसको समीक्षा छापिने गरेको थियो ।
नामैले भन्छ यो साइभियले गरेको आफ्नो कोठाको यात्रा हो । उनको यात्रा बयालीस दिन लामो थियो जति बेला उनी आफ्नो कोठामा थुनिएका थिए ।
उनको यात्रा र यात्रा वर्णन गर्ने शैली अनौठो रहेछ । उनले लेखेका छन्, ‘फादर बेक्कारियाको नापअनुसार, मेरो कोठा ४८ डिग्री पूर्वी अक्षांशमा अवस्थित छ । यो पूर्व–पश्चिम फैलिएको छ । कोठाको एउटा भित्तोदेखि अर्काे भित्तोसम्म जान आउन ३६ पाइला हिँड्नुपर्छ ।’
लगातार तीन दिनसम्म एक पाइला पनि नचालेपछि मैले साइभियको यात्राको नक्कल गर्ने अवसर पाएँ ।
काठमाडौँको मध्यभागतिरको माइतीघरको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा मैले निकै उत्साहका साथ यो यात्रा थालेँ । एक, दुई, तीन... । सीधा अगाडि बाह्र पाइला चालेपछि मेरो हिँड्ने बाटो भित्ताले छेक्यो । एक पाइला देब्रे लागेर पूरा मोडिएर बाह्रै पाइला चालेपछि म आफ्नो बेडमा आइपुगेँ । मेरो यात्रा सफलतापूर्वक टुंगियो ।
यसअघि मैले गरेका कुनै पनि यात्रा यति रामोञ्चक थिएनन् । ती यात्रामा यात्रा सफल होला कि नहोला भन्ने चिन्ता र कौतूहल उत्रो हुँदैनथ्यो । मेरो यो यात्राको सफलता निकै धरमरमा थियो । यस्तो धरमर पाँच हजार मिटरभन्दा अग्लो लार्के भञ्ज्याङ पार गर्दा पनि भएको थिएन । लार्के भञ्ज्याङभन्दा अग्लो लिपुलेक पार गरेर तिब्बत जाँदा पनि भएको थिएन ।
यो यात्रा सफल भएकोमा म जति हर्षित भएँ त्यति हर्षित म मानसरोवरको यात्रा सक्दा भएको थिइनँ । सफलतापूर्वक यात्रा सकेकोमा म, मेरो परिवार त खुसी थियौँ नै । मेरो यो यात्रा गराउने डाक्टरहरू त्यति नै खुसी थिए । मेरो सफल यात्राबाट उनीहरूले तीन दिनअघि गरेको सर्जरीले बिगार गरेको रहेनछ भन्ने प्रमाण दिएछ । म हिँड्न सक्ने रहेछु भन्ने थाहा भयो ।
यो यात्रा गर्न जति तयारी गरेको थिएँ यसअघिका कुनै पनि यात्रामा गरेको थिइनँ । यात्रा गर्ने दिन बिहानै नर्स आएकी थिइन् । उनले मेरो ब्लडप्रेसर, तापक्रम जाँचेकी थिइन् । त्यसपछि उनले मलाई यात्रा गर्ने विधिबारे लामो विवरण दिएकी थिइन् : त्यो यात्रा थाल्नुअघि उनले मेरो टाउकोपट्टिको भाग कसरी उठाउँछिन्, मेरी श्रीमतीले मेरो खुट्टा बेडबाट कसरी तल झारिदिन्छिन्, मैले खुट्टाले भुइँ कसरी टेक्नुपर्छ, त्यसपछि मेरो जीउ कसरी सीधा पार्नुपर्छ आदि ।
साइभियले छोटो दूरीमा पनि लामो यात्रा गर्ने तरिका निकालेका रहेछन् । त्यो तरिका यस्तो रहेछ, ‘म एउटा भित्तादेखि अर्काे भित्तासम्म सोझो हिँड्दिनँ । दायाँ–बायाँ, यताउता जता मन लाग्छ त्यतै हिँड्छु ।... मेरो टेबलबाट म एउटा कुनातिर जान्छु । त्यहाँबाट छड्के बाटो समातेर ढोकातिर लाग्छु । हिँड्न सुरु गर्दा फर्केर टेबलमै आइपुग्ने विचार गरेको भए पनि बाटोमा कुर्सी फेला पर्‍यो भने म तुरुन्तै त्यहाँ बस्छु ।’
त्यस दिन मैले साइभियको यो स्वच्छन्द यात्राको नक्कल गर्न भने पाइनँ किनभने उस्ताद र सिकारु डाक्टर अनि नर्सको लामले मेरो बाटोको दुवै किनारामा बार लगाएको थियो । मलाई बाङ्गोटिङ्गो हिँड्न अनुमति थिएन ।
तर बितेका केही दिन मैले साइभियभन्दा एक पाइला अघि बढेर उनले भन्दा स्वच्छन्द यात्रा गरेको थिएँ । अस्पतालको कोठामा । कोठामा पनि नभनौँ बेडमा ।
बेडमा सुतेका बेला मेरो केही पनि काम थिएन । केही पनि काम गर्न मलाई अनुमति थिएन, सुतेको ठाउँबाट वर्कन फर्कनसमेत । त्यसो गर्नुपर्दा मैले मलाई रुँग्ने मानिसलाई भन्नुपथ्र्यो । उनले नर्सलाई भन्नुपथ्र्यो । त्यसपछि नर्स र मलाई रुँग्ने मान्छे दुई जना भएर मेरो शरीरलाई धक्का नलगाईकन बेडको तन्नाका सहायताले मलाई फर्काइदिन्थे । सुतेको ठाउँबाट उठ्ने कुरै थिएन । त्यसैले म दिमाग मात्र लिएर घुम्न निस्किन्थेँ ।
हिजो बिहान म १०/१५ वटा घोडा पिच सडकमा हिँड्दा तिनका टापले निकालेको आवाजले ब्युँझिएँ । सलक्क परेका चिल्ला, खैरा घोडामा सवार, खाइलाग्दा ज्यान भएका घोडचढीको पछि लागेर हिँडे । हिजो पानी परेकाले बाक्लिएको बिहानको हुस्सु छिचोल्दै हामी सिंहदरबारको दक्षिण गेट पुग्यौँ । त्यहाँबाट भद्रकाली पुगेर टुँडिखेल पस्यौँ ।
बाटोभर मलाई कुनै किसिमको असुविधा भएन । तर हरियो टोप लगाएका घोडचढीले जसरी घोडाको चालसँगै आफ्नो शरीर अलिकति अघिल्तिर लगेर उठाउँदै, बसाउँदै गर्न भने मैले सकिनँ । घोडचढीले टुँडिखेलमा अभ्यास गर्दा पनि म बसि मात्र रहेँ ।
संसारभर लडाइँमा घोडचढीको विशेष महत्त्व हुन्छ । तर सुगौली सन्धिपछिका २०० वर्षमा नेपालका घोडचढीले लडाइँ गर्नु परेन कि ? थरीथरीका दिवसमा हर्ष बढाइँ गर्ने बेलामा भने आजभोलि पनि घोडचढीको भाउ बढ्छ ।
घोडा र घोडचढी दुवै पुसको जाडोमा पनि दुई–चारचोटि पसिनाले खल्खली भएपछि उनीहरू टुँडिखेलबाट बाहिर निस्किए । म पनि उनीहरूकै पछि लागेँ । अस्पताल आइपुगेपछि मैले उनीहरूलाई छाडिदिएँ । उनीहरू अस्पतालभन्दा अलि उत्तरपश्चिमको नेपाल क्याभ्लरी लेखिएको गेट खोलेर भित्र पसे ।
बिहानको यात्राको थकाइ मरेपछि पनि म फुर्सदिलो नै थिएँ । त्यसैले बेडमा सुतेर उत्तरतिर झ्यालबाहिर जे–जे देखिन्छ त्यही हेरेँ । नीलो आकाश र त्यसलाई पछाडि पारेर एउटा चील उडिरहेको थियो । कुनै बेला पँखेटा चलाएर र कुनै बेला कावा खाएर ।
बेडबाट उठेर हेर्न सकेको भए मैले चीलको पछाडि नीलो आकाश होइन लाङटाङ, घ्याङ छेम्पु र दोर्जे लाक्पाजस्ता हिमाल देख्ने थिएँ । यसपालिको हिउँदमा काठमाडौँबाट ती हिमाल सधैँभन्दा बढी चहकिला देखिएका थिए । उति टाढा पनि त थिएनन् । ६० किलोमिटर कति टाढा हो र ?
आठ महिनापहिले म ती हिमालको फेदमा पुगेको थिएँ । त्यस यात्रामा मेरो सुर थियो— सत्र वर्षअघि त्यहाँ जाँदा जुन बाटो हिँडेको थिएँ त्यही बाटो हिँड्ने, जुन ढुंगामा पाइला टेकेको थिएँ त्यही ढुंगामा टेक्ने, जुन घरमा बास बसेको थिएँ/खाना खाएको थिएँ त्यही घरमा बास बस्ने/खाना खाने, जसलाई भेटेको थिएँ उसैलाई भेट्ने । २०७२ सालको भुइँचालोले गर्दा मेरो चाहना राम्ररी पूरा हुन पाएन । कति ठाउँमा मैले पहिले हिँडेको बाटै थिएन । मैले पहिले टेकेका कति ढुंगा थिएनन् । कति पुराना घर सग्ला थिएनन् । कतिवटा त गाउँ नै थिएनन् । मैले पहिले भेटेका केही मान्छे कालगतिले बितेछन् । केहीलाई भुइँचालोले मारेछ ।
साइभियले आविष्कार गरेको यात्रा गर्ने नयाँ तरिकामा आफू बसेको कोठा बाहिर निस्किने विधिविधान छैन । तर मैले त्यसमा सुधार गरेर आफू अस्पताल बस्दाका केही दिन आफूले केही समयपहिले गरेको लाङटाङ यात्रा दोहोर्‍याएर बिताएँ ।
साइभियले आफ्नो किताबमा ठूलो आत्मविश्वासका साथ लेखेका छन्, ‘यस धर्तीमा पैदा भएका अथाह मानिसमध्ये एक जना फगत एक जना पनि यस्तो मानिस भेटिँदैन जसले मेरो किताब पढेपछि मैले आविष्कार गरेको यात्राको यो नयाँ तरिकालाई अस्वीकार गर्छ ।’
हो साइभिय, पुरानै ढाँचाको यात्रामा रमाउने मानिस मलाई पनि तिमीले आविष्कार गरेको नयाँ यात्रापद्धति उपयोगी भयो । पुरानो खालको यात्रा गर्न नसकेका आठ/नौ महिना तिम्रो किताबले मलाई राहत दियो । तिमीले सुझाएको नयाँ तरिकाले यात्रा गर्न पाएकाले यात्रा गर्न नपाउँदा हुने अत्यास मैले भोग्नु परेन । तिमीलाई धेरै धन्यवाद ।
प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७४ १४:५२